ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် မာဇဒါဒယ်မီအို များ | မာဇဒါဒယ်မီအို ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Cassette Radio (39)
Silver Mazda Demio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Silver Mazda Demio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag...
Black Mazda Demio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည...
Silver Mazda Demio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
ပြည်တွင်းက မာဇဒါ ဒယ်မီအိုများ
မာဇဒါ ဒယ်မီအိုများဟာ ပြည်တွင်းကို ဂျပန်ကားများ စပြီး ၀င်ဝင်ချင်း တိုယိုတာ နဲ့ ဟွန်ဒါ တို့လို အချိန်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စ၀င်ဝင်ချင်း နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်များမှာတော့ ၀ယ်ယူမူ အနည်းငယ်ကျဲသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ဈေးကွက် တစ်ခု အနေနဲ့ ရှိနေပြီး တစ်ချို့သောသူများ ၀ယ်ယူ စီးနိင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စူပါ မီနီကားလေးတွေ ဖြစ်သည့် နည်းတူစွာ ပြည်တွင်း လမ်းများနဲ့ ကိုက်ညီပြီး အဆင်ပြေလှတဲ့ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်ကလည်း ၁၃၀၀ စီစီသာ ရှိတာမို့ အခွန်နဲ့ အဆင်ပြေစေမဲ့ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ၀င်ချင်းတုန်း က ဈေးအနည်းငယ် တင်နေခဲ့ပေမဲ့ အရင်နဲ့ စာလျှင်ဈေးတွေက သင့်တင့်တဲ့ အနေနဲ့ အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားတာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စူပါ မီနီကားလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ၄၊ ၅ ယောက် သာ ဆန့်ဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ သမားများ အတွက် ကောင်းမွန် လှပတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံကွဲ များရှိပြီး ၂၀၀၇ ဆိုရင်တော့ အနည်းငယ် လေးထောင့်ကျတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုးကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် တုန်းကတော့ ပြည်တွင်းမှာ လူစီးများပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ၂၀၀၈ နဲ့ အထက် ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်တွေကို စီးနင်လာကြပါတယ်။၂၀၀၈ အထက်မော်ဒယ်တွေကတော့ ကိုယ်ထည်ကို လုံးလုံး ၀န်းဝန်း ပုံစံဖက်ကို ဦးစားပေးထားတဲ့ ကိုယ်ထည်ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၂ လောက်ထိကို အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့ရနည်းတဲ့ ဒီဇယ် ၁၄၀၀ စီစီနဲ့ ဒီဇယ် ၁၆၀၀ စီစီတွေလည်း ထုတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပုံစံပြောင်းတာကတော့ ၂၀၀၈ ကနေ စပြောင်းပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဆိုရင် ပုံမှန် ပုံပြောင်းတွေထက် ပိုပြီး သစ်လွင်ကာ ဒီဇိုင်းမြင့်မားလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကားရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေလည်း မသိမသာ အနည်းငယ်ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ်တွေမှာတော့ ၁၅၀၀ စီစီတွေ ထုတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှန် သွင်းကြတာကတော့ ၁၃၀၀ စီစီ ဒယ်မီအိုတွေပါပဲ။ အော်တို၊ ဓာတ်ဆီ ဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီတွေပါ ကားတော်တော်များများမှာ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မှန်အမည်း ကားတွေကိုပါ ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက် ၃ဆက်ကျော်လောက်ထိ ရှိကာ တတိယအမျိုးအစားကို လက်ရှိ ပြည်တွင်းအနေနဲ့ အတွေ့ရများမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး (၅) ပေါက် ဟတ်ဘတ် အမျိုးအစား ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘီးယက်တွေပါပဲ။
မာစတာ ဒယ်မီအိုတွေဟာ ဟတ်ဘတ်ကား အသေးစားမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ဆီစား သက်သာလှတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ မော်ဒယ်တွေကို ပိုပြီး စတိုင်ကျမှုကို ပေါင်းထည့်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မြို့တွင်း မြို့ပြင် ၂၈၊၃၄ မိုင်ရရှိပါတယ်။ အော်တို ဂီယာတွေကိုပဲတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး စပေါ့ဗားရှင်းတွေမှာ လျှပ်စစ်ပါဝါ စတီယာရင်၊ အန်တီ လော့ခ် ဘရိတ်၊ တည်ငြိမ်မှု ကွန်ထရိုး၊ဆွဲအား ထိန်းချုပ်မှု၊ ပါဝါ တံခါး လော်ခ် နဲ့ ရီမုတ် ကီး တွေပါပါရှိလာပါတယ်။ အဲယားကွန်း၊ ပါဝါ ၀င်ဒိုး၊ မှန်များနဲ့ လေအိတ် ခြောက်လုံး၊ ကာဗာ အပြည့်တွေနဲ့အတူ ၁၅ လက်မ ဘီးတွေကိုပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် ဈေးနှုန်းများ အနေနဲ့ သိန်း ၈၀ လောက်က စပြီး ရှိပါတယ်။ ၁၀၅ သိန်း အထိ ရှိတတ်ပြီး ပုံမှန် အရင်ကဈေးတွေထက်တွေ သက်သာတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် နဲ့ ကား ဂရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေ ကွာခြား သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မာစတာ ဒယ်မီအိုများဟာ ပေါ့ပါးသေးငယ်ပြီး ဈေးနှုန်း သင့်လျော်လှတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ဌင်းမှာ ပါရှိတဲ့ ၁၃၀၀စီစီ အင်ဂျင်တွေဟာ အဆင်ပြေကာ ဆီစား သက်သာလှပါတယ်။ မြို့တွင်း မြို့ပြင် အသုံးပြုမှုအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလည်း လှပတာမို့ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။